Mma karịa Netflix na kpam kpam free !!. Gụnyere na Playlọ Ahịa Google Play Gam akporosis
Na ọkwa ọhụrụ a, m ga - akwado ngwa dị egwu maka gam akporo, ngwa iji lelee ọdịnaya gụgharia ma ọ bụ budata ya ozugbo na ngwụcha ngwanrọ anyị, ngwa nke bụ ezigbo agafe ebe ọ bụ ọ ka mma karịa Netflix ma ọ bụ n'efu.
Ngwa nke, dika m gwara gị ma ọ dịkarịa ala maka oge ahụ dị maka nbudata kpọmkwem site na Plalọ Ahịa Google Plav, ọ bụ ezie na ọ nwekwara web version nke mere na ị pụrụ iji ya na-ekiri gụgharia ọdịnaya ọ bụla na ihe nchọgharị weebụ, site na sistemụ arụmọrụ ọ bụla naanị site na ịbanye na akaụntụ njirimara gị.
A na-akpọ ngwa ajụjụ Plusdede ma obu uzo ozo ugbu a masdede anaghị arụ ọrụ, ị nwere ike debanye aha ozugbo na weebụsaịtị gị ma nwee ike iji ya na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla dsite n'otu uzo a o budata ya iji ya mee ihe n'ụzọ dị ntụsara dịka ngwa maka gam akporo nwere interface dị ezigbo nkenke ma na-atọ ụtọ nke na-enye anyị ohere ịme ọtụtụ arụmọrụ na nhọrọ nhazi na ngosipụta nke ọdịnaya ejiri na Plusdede.
1 Budata Plusdede n'efu na Playlọ Ahịa Google
2 Ihe niile Plusdede na-enye anyị
Budata Plusdede n'efu na Playlọ Ahịa Google
Ihe niile Plusdede na-enye anyị
Plusdede na-enye anyị ngwa nke oge a, kensinammuo ma rụọ ọrụ site na ya na mgbakwunye na ịnwe ike ịlele ọdịnaya gụgharia ma ọ bụ ibudata na gam akporo anyị, ọ na-enyekwa anyị ohere ịhụ ọdịnaya dị ndụ dị ka ihe egwuregwu,
Na mgbakwunye na nke a, anyị nwekwara ike ilele nkwanye ọdịnaya dịka ihe nkiri na usoro kpamkpam n'efu, oge niile nke usoro dịka ewu ewu Narcos, Egwuregwu nke n'ocheeze, Mr Robot, Castle, Gotham, Murder, Breaking Bad, Orange bụ nwa ọhụrụ, ofmụ nke ọgba aghara, Riverdale, Absentia na ọtụtụ ndị ọzọ ma ọ bụ ihe nkiri dị ka The Dark Tower, John Wick 2, Onye Gbuo Mbụ, Onye Nlekọta Na-adịghị Ahụ Anya, Moana, Ekweghị ume, Hacker, Saga Saga zuru ezu, Sent Life na aha na-enweghị ngwụcha nke mmasị, akụkọ na oge niile.
Ngwa ngwa nwere akụkụ dị mma na nke bara uru na mmịfe dị n'ụdị Ngwa Kachasị Ihe eji arụ ọrụ nke anyị nwere ike ijikwa usoro na fim anyị na-esoỌ na-enye anyị ohere ịmepụta listi ma ọ bụ dozie ihe omume na kalenda dị n'ime ngwa ahụ ka anyị wee ghara ịhapụ isiakwụkwọ nke usoro kachasị amasị anyị ma ọ bụ ihe omume egwuregwu nke mmasị anyị.
Ma nke ahụ bụ ọrụ ọzọ dị ukwuu nke ngwa ahụ kemgbe Ọ na-agbasa ọdịnaya dị ndụ n'agbanyeghị na ọ bụ naanị na ụdị ntanetị nke ngwa ahụ, ma obu ihe bu otu ihe na yagaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Plusdede abanye na nzere nnweta anyị, ya bụ, jiri aha njirimara na paswọọdụ anyị.
Ihe ozo ekwesiri igosiputa site na ngwa ndi Plusdede, ngwa dị mma karịa Netflix na n'efu, bụ na awade zuru nkwado maka Google Chromecast na izipu ihuenyo ka mma nke masịrị m n'ezie, ọ bụkwa na e wezụga na ị nwere ike ịhụ na ị nwere ike ịmalite nke ọma, nnyefe ahụ anaghị ebipụ n'oge ọ bụla ma ọ bụ kụọ ụdị ọ bụla ọbụlagodi na njikọ dị ala dị ka otu m nwere n'ụlọ, nke bụ adsl nke na-enweghị ike iru 5 Mbs nke nbudata data.
Ọ bụ ezie na ihe niile anaghị akwụsị ebe ahụ, ọ bụkwa ya anyị nwekwara ike iyo ọdịnaya nke ngwa ahụ, ma ọ bụ usoro ma ọ bụ ihe nkiri site genre, echiche ndị ọzọ ma ọ bụ akụkọ, a na-enyekwa anyị ngalaba abụọ pụrụ iche, enwere ike ịnweta ya site na sidebar anyị nwere ike chekwaa usoro ihe nkiri anyị kacha amasị anyị na ndị anyị na-eso n'oge a.
Anyị nwekwara ebe a na-ebudata ihe nke bụ ebe ọdịnaya anyị kpebiri ibudata na-aga ịhụ n'oge ọzọ na-enweghị mkpa njikọ netwọk, yana a malite mpaghara ebe anyị nwere ike ịchọta isiakwụkwọ na-esonụ nke usoro anyị na-ele.
Maka ihe a niile m kọwaara gị na maka otu ngwa ngwa gam akporo si arụ ọrụ, taa, Satọde n'etiti izu ụka na mgbe elekere iri na otu gachara na Spain, ana m ede edemede a iji kwado nke ruo ugbu a na mgbe e mesịrị na-eji ya ogologo ụbọchị dum, ọ bụ maka m kacha mma free ngwa na-ekiri usoro na ihe nkiri maka n'efu na gụgharia ma ọ bụ budata ha n'efu na ezigbo mma.
Dị mma karịa Netflix na kpamkpam n'efu !!
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ibudata ngwa ahụ na Google Play Store, ma ọ bụ n'ihi na ewepụla ya ma ọ bụ n'ihi na ọ nweghị maka obodo gị, M na-adụ gị ọdụ ka ị gafere obodo Androidsis na Telegram ebe ọ bụ na site n'ebe ahụ ị ga-enwe ike budata ngwa mbụ ahụ na-enweghị ihe ọ bụla, ngwa nke jikọtara mgbasa ozi na-eme ka anyị chere 10 sekọnd tupu anyị elee isi nke usoro ma ọ bụ ihe nkiri kachasị amasị anyị, mgbasa ozi na ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ọ na-ewe iwe, bụ ụgwọ ezi uche dị na ya iji nwee ike ịnụ ụtọ ọdịnaya niile dịịrị anyị awade kpam kpam.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » gụgharia » Mma karịa Netflix na kpam kpam free !!. Ọzọ dị na Playlọ Ahịa Google
Ọ bụ ngwa kachasị njọ nke playstore lag na ịkwụsị ya mgbasa ozi zuru ezu.
Zaghachi Miguel Lorenzo
Zaghachi Rocío Verdeal
Ngwa ahụ dị mma, ejiri m ya ụbọchị atọ ma ọ na-aga nke ọma, mgbasa ozi na-awụlikwa elu bụ otu nke na-awụda n'ọtụtụ egwuregwu nke ị ga-echere sekọnd iri ka ị nwee ike ịwụli ya. Mgbe sekọnd iri playback na-amalite na-akpaghị aka na-enweghị nkwụsị, na mgbakwunye na ọ bụrụ na ihe nkesa ị họrọ adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ ala, ọ na-aga ịchọ ndị ọzọ.
Otu nke nwere ADSL na-agwa gị na o ruteghị 5Mbs.
Site na openload na nowvideo ebe ọ naghị ebudata dị mfe ... Ọ jọgburu onwe ya ...
Na ndụ ihe ọ bụla bụ n'efu ịghọta
Zaghachi José Luis Buenaño Durán
n'efu dị oke ọnụ
Naa iyi haha.
Zaghachi Ale Font
Nke a bụ ostia !! Damn, antivirus anaghị achọpụta ihe ọ bụla, mana ngwa ahụ na-enyo enyo n'ime ma ọ bụrụ na ọ nwere mgbasa ozi !! oge obula ichoro ihe. Naanị onye ọkpụkpọ ahụ malitere ... https://mobile.twitter.com/Plusdedecom/status/910866035221434368?p=v
Kedu ihe mere androidsis tupu ị dị jụụ !!!
Mana ngwa a ọ kwadoro? M na-arịọ maka ntụnyere na NetFlix.
Enwere m ịnụ ọkụ n'obi, ọkụ ọkụ na-adịghị ahụkebe, oke mmasi maka anyị ibudata ngwa a nke iwu na-enyo enyo (n'eziokwu, gị onwe gị nwere obi abụọ na ọ ka dị na GPlay). See na-ahụ onye na-agba aja, ebe m chere na nke a bụ ihe a na-akwado nkwado na-ekpuchi ekpuchi, anyị ga-akwụ ụgwọ euro ole na ole maka inye hype na ngwa, nke na mgbakwunye na igosipụta ọdịnaya nke ihu, onye maara ihe ọzọ ọ na-ezo.
You bụ ezigbo enyi, yana ihe ngwa ahụ kwụrụ m maka ịkwado ya, ngwa m chetara dị na Playlọ Ahịa Google Play nke bụ ụlọ ahịa ngwa ahịa maka gam akporo, ikekwe enwere m ike ịdọrọ na Caribbean ma ọ bụ Maldives! !!
N'ebe a na Androidsis m na-akwado ngwa kwa ụbọchị ma ọ nweghị onye n'ime ha na-akwado ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ. Naanị m na-akwado ihe m chọrọ ma ahụ m na ọ na-atọ ụtọ ịkwado!
Amaara m ezigbo oriọna nke ị nwere ike jikọọ nrụnye ọkụ nke ụlọ gị, na-enweghị mgbochi ike ma ọ bụ nkwụsị. Ọ dị mma karịa ụlọ ọrụ eletrik gị na n'efu!
Obere ihere ahu ihere. Gbaa ndị mmadụ ume ịkwụsị ịkwụ ụgwọ maka Netflix, dị ka a ga - asị na ọ bụ nzuzu ime ya. Ebee ka ị chere na ego si na imepụta ọdịnaya? O doro anya na esighi na mgbasa ozi dị na ngwa a, ọbụlagodi na ị na-ewere ha "ịkwụ ụgwọ ezi uche."
Kedu ihe ị ga-eche ma ọ bụrụ na ha gbagburu gị edemede ọ bụla ị bipụtara na weebụsaịtị a, maka uru nke ndị ọzọ na weebụsaịtị ndị ọzọ na-akwalite ya?
Ọkụ ole na ole ahụ ị nwere onye gị na ya ga - eso nwee ihe ọkụkụ iri ise.
«Amaara m ezigbo oriọna nke ị nwere ike ijikọ eletriki echichi nke ụlọ gị, na-enweghị ike mgbochi ma ọ bụ he. Nke ka mma karie ụlọ ọrụ eletriki gị na n'efu kpamkpam! »
N'ihe gbasara okwu gị, gwa gị ihe anyị niile ga - eme ka ha ghara ịkwụ anyị ụgwọ ọkụ na ụgwọ ha na - ana anyị ugbu a ịkwụ ụgwọ ọnwa nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị rụrụ arụ na ndị na - enweghị isi na-anọdụ na bọọdụ ndị isi nke ụlọ ọrụ eletrik. Ihe omuma atu I nyere m !!!
_ Na-asọ oyi, nrụgide dị mma karịa Netflix okwu atọ ọ bụla, amaara m na ha abụghị usoro dị egwu mana nke a bụ ihe nwute ...
Agbalịrị m ihe nkiri 3 na usoro 3 na enweghị m ike ịhụ ihe ọ bụla, sava juputara ma wepu njikọ.
Kedu ihe mere i ji kwuo na ọ ka Netflix mma? Na Netflix ihe niile na-ebu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo, n'ezie ọdịnaya dị ntakịrị emelitere.
Zaghachi Ignacio Joel Perez Marquez
O nwere mgbasa ozi banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na 'ụmụ nwanyị na-achọ mmekọahụ'; enweghị ike itinye ya n'ụlọ. Ọmịiko.
Zaghachi Miguel Angel D.
Aghọtaghị m otu esi ebipụta otu isiokwu gbasara ngwa na-enye gị ohere ịhụ ọdịnaya akwụ ụgwọ na-akwụghị ụgwọ. Nke ahụ bụ, na-akwadoghị.
Achọpụtara m na ọ bụ ihe ihere na ị kpọsaa ngwa ndị na-eweta ọdịnaya nke enweghị ntụkwasị obi ma ọ bụ iwu enweghị isi na nke ahụ na ha jikọtara anyị na mgbasa ozi. Also na-aga site na peteneras ma wụsa anyị na nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na blọọgụ gam akporo iji chebe na ndị mmadụ na-aghọ aghụghọ n'usoro ihe.
Okwu siri ike ịchọta iji kọwaa otú nke a si bụrụ ihe nwute.
Zaghachi na Superbusti
Mkpesa na Google na m na-ekekọrịta otu ngwa nke iwu kwadoro na ụlọ ahịa ngwa gam akporo maka oge ụfọdụ.
Ah !! Otu ihe ọzọ ga-atụfu nkume mbụ ma ọ bụrụ na ị wụnyebeghị ngwa iwu na-akwadoghị, Windows gbawara agbawa ma ọ bụ mmemme nke kwesịrị mgwakota agwa dị ka Photoshop.
- Nwere mgbasa ozi
- linksfọdụ njikọ anaghị arụ ọrụ
- Gwuo ọdịnaya megidere iwu
- Anyị amaghị ma ọ ka dị na Storelọ Ahịa Play.
Ma hey, ọ (ọtụtụ!) Mma karịa Netflix.
Kwere na Francisco jupụtara na-ekwekọghị ekwekọ kama ịtụ gị ụjọ, Francisco.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere mmasị, nnọchi bụ ugbua, ndị nke playdede.com na Telegram ha etinyela beta iji hụ ebe ikpo okwu dịka m gụrụ na ha malitere ya na ụbọchị ole na ole.
Ngwa ekwentị na-ajụ oyi nke ekwentị: Ha na-arụ ọrụ n’ezie?
Egwuregwu 3 ka ị ghara ịhapụ izu ụka a